एनआरएन अमेरिकामा कसले बाजी मार्ला ? – Everest Times News
एनआरएन अमेरिकामा कसले बाजी मार्ला ?
२०७४ असार १७, शनिबार ०६:१४
एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचन अन्यौलकाबीच निर्वाचन आयोगले अगस्टको पहिलो हप्तातिर गर्ने योजना बनाएको छ । मे माहिनामा हुने भनिएको निर्वाचन सदस्यता वितरणमा देखिएको विवादको कारण ढिलाई भएको समितिको जिकिर रहेको छ । मिति स्पष्ट नतोकिएपनि अगस्टमा निर्वाचन हुने अनुमानमा नेतृत्वमा चार आकांक्षी देखिएका छन् ।
प्रवासमा विभिन्न पृष्ठभूमिबाट चिनिदै आएका उनीहरु यतिखेर आफ्नो चुनावी नारा लिएर विभिन्न राज्यमा आफ्ना एजेन्डा सुनाउन व्यस्त छन । एनआरएनमा नेतृत्व दाबी गर्दै वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष डा. केशव पौडेल, सल्लाहकार गौरी जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण पोखरेल र उपाध्यक्ष रविना थापा मैदानमा उत्रेका छन् । एनआरएन अमेरिकाको नेतृत्वमा आउन चाहाने चर्चित आंकाक्षीले एनआरएनलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न एजेन्डा ल्याएका छन् । उनीहरुले उमेदवारी दिनुका कारण पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
बाँकी रहेको काम पुरा गर्नुछ–डा. केशव पौडेल
एनआरएन अमेरिकाका वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष डा केशव पौडेल न्युमेक्सिस्थित मेडिकल डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर हुन । उनको मातहतमा अहिले ६० जना चिकित्सकहरु कार्यरत छन भने ५ जना डाइरेक्टरहरु छन । सन २०१४ देखि न्युमेक्सिको मेडिकल डिपार्टमेन्टमा काम गर्दै आएका उनी यसै वर्ष लभलेस हेल्थ सिष्टमको उत्कृष्ठ चिकित्सकको रुपमा ‘हेल्थ केयर हिरो अवार्ड’ र अमेरिकन कलेज अफ फिजिसियसनको कम्युनिटि सर्भिस अवार्ड पाएका छन । त्यस्तै दुई अघि सोसाइटी अफ हस्पिटल मेडिसिन न्युमेक्सिको अध्यक्ष हुदा लिडरसीप अवाड समेत पाउन सफल भएका थिए । एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष डा पौडेलले आफनो कार्यकालमा गरेर पनि पुरा हुन नसकेका कार्यहरुलाई पुर्णता दिनका लागी पुन नेतृत्वमा जान लागेको बताउछन । ‘ विस्तारै ठुलो हुदै गएको एनआरएन सस्थालाई बलियो बनाउनका साथै आफनो नेतृत्वमा सुरु गरेको तर पुरा हुन नसकेको कार्यहरुलाई पुरा गर्नकै लागी पुन नेतृत्वमा जान लागेको हो,’ पौडेलले भने –‘प्रवासमा नेपाली कम्युनिटी सेन्टर खोल्ने, विभिन्न राज्यमा नेपाली समुदायका लागि फिनरल होमबनाउने र दोहोरो करको झन्झट हटाउन आफुले पुन नेतृत्व लिन चाहेको डा पौडेलले बताए । ‘संस्थामा म भन्दा पनि अझै कोही क्षमतावान साथीहरु आएर केही गर्न चाहान्छन भने म छोडन तयार छु ’ उनले बताए ।
एनआरएनलाई सबैको बनाउनुछ–गौरी जोशी
लमजुङमा जन्मेका गौरी जोशी सन् १९९७ मा अमेरिका पढ्न आएका थिए । अहिले उनी सफल व्यवासायीको रुपमा चिनिन्छन् । टेक्सासबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनले आफनो व्यवसायमा झण्डै ३ सय जनालाई रोजगारी दिएका छन् । जसमा ६५ प्रतिशत नेपाली रहेका छन् । एनआरएनभन्दा अघिको न्याक नामक संस्थामा सन २००७ देखि ९ सम्म कम्युनिकेसन डाईरेक्टरको रुपमा कार्य गरेका उनी अहिले एनआरएनको सल्लाहकार हुन् । अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुलाई भावनात्माक रुपमा सहयोग गर्न आफु नेतृत्वमा जान लागेको उनले बताए । ‘एनआरएनलाई राजनीतिबाट टाढा राखी सबैको साझा बनाउन म नेतृत्वमा जान लागेको हो,’ जोशिले भने, ‘प्रवासमा सबैले हाम्रो एनआरएन बनाउन म निर्वाचनमा होमिएको हो ।’
नेपाल र टेक्सासमा व्यवसाय गर्दै आएका जोशीले चितवन, गोर्खा र धादिङमा निम्न आय भएका चेपाङ र थरु विद्यार्थीहरुको सहयोग गर्दै आएको बताए । नेपालमा बैंक, अमेरिकामा रियल स्टेट र आइटीको क्षेत्रमा जोशीले व्यवसायमा निकै सफलता हासिल गरेका छन् । एनआरएनको नेतृत्वमा जानकै लागि उनी ६ महिनादेखि कसरत गरिरहेका छन् ।
एनआरएनको संरचना बलियो बनाउनुछ–कृष्ण पोखरेल
एनआरएन एनसिसीमा महासचिव हुदै वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका कृष्ण पोखरेल पनि नेतृत्वको दाबी गर्दै मैदानमा उत्रेका छन् । न्युयोर्क लाइफ इन्सुरेन्समा कार्यरत पोखरेल महासचिव हुदै बरिष्ठ उपाध्यक्षसम्म भएका हुन् । संस्थागत विकाससँगै सबैको साझा संस्था बनाउन आफु एनआरएनमा निरन्तर लागेको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘एनआरएनको दुई कार्यकालमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न मैले उमेदवारी दिन लागेको हो,’ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘यो सामाजिक संस्था हो यसमा कसैले पैसाको खेलो गरेर मान्छेको विवेक र चेतनालाई बन्धक बनाउने सोच हटाउने मेरो अभियान हो ।’
न्युयोर्क लाइफ इन्सुरेन्सको फाइनन्सल प्रोफेसलको रुपमा कार्यरत उनले एनआरएनको संरचनालाई बलियो बनाउने सोच रहेको बताए । अबको एनआरएनको सबै सदस्यहरुको प्रोफाइल बनाएर एनआरएन कार्ड बनाई मोबाइल एप्सको माध्यमबाट हेर्न सकिने बनाउने योजना उनले अगाडि सारेका छन् ।
एनआरएन सिस्टममा ल्याएर ग्रसरुटमा लैजान उमेदवारी–रविना थापा
बाल्टिमोर क्षेत्रमा परिचित वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष रविना थापा पनि नेतृत्वका लागि उमेदवारी दिने तयारीमा छिन् । बाल्टिमोरमा नेपाल चिनाउने लुम्बिनी रेस्टुरेन्ट नामक व्यवसाय गर्दै आएकी थापा बाल्टिमोर एसोसियसन (बाना)की पूर्व अध्यक्ष हुन । ७ वर्ष जापानमा व्यवसाय गरेर अमेरिकामा आएकी उनी २००२ बाट एनआरएनमा लाग्दै उनले व्यवसायसँगै सामाजिक सेवाको भावनाले आप्mनै नाममा रविना फाउन्डेसन स्थापना गरेकी छन् । फाउन्डेसनले नेपालमा अनाथ बालबालिका र वृद्धाहरुलाई सहयोग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सन २०११ मा खोलेको रविना फाउन्डेसनमा उनले कमाएको १० प्रतिशत जम्मा गरेर नेपालमा अनाथ बालबालिकालाई र बृद्धाहरुलाई सहयोग गदै आइरहेको उनले बताइन् । यसको साथै आफु एनआरएनमा हुदा उनकै पहलमा देवघाटमा हिडन नसक्ने वृद्धाहरुको लागी हेरचाह गर्ने भवन बनाउने कार्यको थलानी भइरहेको बताए । ‘एनआरएन यहाँसम्म आइपुग्दा पनि केही सिस्टम छैन अब सिस्टम ल्याएर ग्रासरुटमा पु¥याएर सबैले स्वतस्फुत रुपमा एनआरएन बनाउन नेतृत्वमा जान लागेकी हुँ’ उपाध्यक्ष थापाले भनिन् ।
निर्वाचन अगस्टको पहिलो साता
न्युयोर्क । एनआरएन एनसिसी अमेरिकाको नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन अगस्टको पहिलो सातातिर हुने निर्वाचन कमिटीले जनाएको छ । यद्यपि मिति भने तोकिएको छैन । सदस्यता छानविन समितिले निर्वाचन कमिटीसमक्ष दिएको सदस्यको नामवालीमा अझै पनि केही समस्याहरु देखिएकोले जुलाईको २१ र २२ मा हुने भनिएको निर्वाचन अगस्टका लागि सरेको निर्वाचन कमिटिको सदस्य विश्व बरालले बताए ।
‘विगतको निर्वाचनको बेला देखिएका समस्यालाई मध्यनजर गरी व्यवस्थित र प्रक्रियागत रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन ढिलाई भएको हो,’ सदस्य बरालले भने, ‘हामीले यो हप्ताभित्र सदस्य छानविनको समस्या टुँग्याउन सकेको भए जुलाईको २१ र २२ मा गर्न सक्थ्यो तर समाधान हुन नसकेकोले अब अगस्टको पहिलो हप्तामा हुने भएको हो ।’ उनका अनुसार सदस्य छानविन समितिले निर्वाचन कमिटिलाई दिएको नामवाली सूचीमा एकै व्यक्तिको इमेलबाट १९ जनासम्मले सदस्यता बनाएको र एकै मान्छेले दोहोराएर सदस्य बनाएको प्रविधिक समास्याहरु देखिएकोले सकेसम्म विवाद नहोस भनेर यस्तो समस्यालाई समाधान गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रियामा जान ढिलाई भएको उनको दाबी छ ।
यस्तो सदस्यता समस्या टेक्सास, क्यालिफोर्निया, न्युयोर्कलगायत अन्य राज्यहरुको रहेको छ । उनकाअनुसार १४ हजार ४ सय ८५ मा घट्ने होइन बढन सक्ने सम्भवना देखिएको छ । सदस्यहरुको समस्या समाधान हुने वित्तिकै कमिटिले निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । विगतमा सिम्पली भोटिङको सिस्टमबाट बदनाम भएपछि यसपटक इलेक्सनबडीबाट निर्वाचन गराउने भएको छ । यसपटक पनि निर्वाचन कमिटिले हरेक मतदातालाई इमेल पठाएर त्यहीअनुसार मतदान गर्न अवसर दिने भएको छ । यस पटकको निर्वाचन कमिटीमा बन्दीता दाहाल, विश्व बराल, भुवन गुरुङ र अन्जन श्रेष्ठ रहेका छन् ।